PH Mitsara yakasarudzwa,China PH Mitsara yakasarudzwa Supplier & Manufacturer
 HomeProductsPH Mitsara yakasarudzwa
PH Mitsara yakasarudzwa (Total 54 Products)
Zvigadzirwa zve PH Mitsara yakasarudzwa , isu tiri vashandi vanobva kuChina, PH Mitsara yakasarudzwa , PH Mitsara yakasarudzwa vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve PH Mitsara yakasarudzwa R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Samsung LM561C LED Pamusoro Kurera Mwenje
Horticulture LED Kupenya Kwepamusoro Kwemiti Dzekurapa
Anodzvanywa 600W Akatungamira Matanho Ekukura Ekurima Kwekurima
PHLIZON Samsung Lm301b 600w Yakatakurwa Foldable Kukura Chiedza
450W Greenhouse chirimwa LED Kurira Chiedza
Phlizon 240W Greenhouse LED yepamusoro Kurera Mwenje
Phlizon Yakapindirwa Kuka Chiedza 600W
PHLIZON 640W Foldable LED inokura Mwenje Bhawa
Dimmable Spectrum King LED Kukura Mwenje 600w
Waterproof Inokura Lamp 600w / 640w muMishonga Chigadzirwa
Samsung 561C Horticultural Inotungamirirwa Mwenje yeStrawberry
Nyowani Samsung Yakazara Spectrum Mwenje weGreenhouse
Samsung Lm301b Kukura Mwenje weGreenhouse
Kurima Phlizon 600w Kurima Kwidza Mwenje
Indoor Kukura Kwemwenje Chiedza Samsung 301b
600w / 640w Wholesale Led Chiedza Kurima
600w Yakatakurwa Kukura Strip Chiedza Chekutengesa
Yakakwira Simba Yakatakura Chiedza 600w yeHydroponics
Foldable 600w Akatakurwa Mwenje weIndoor Bindu
Zuva rakafanana neFoldable LED Chirimwa Kurera Mwenje
Phlizon Linear F Seires 450W Greenhouse chirimwa LED Kurira Chiedza Phlizon Linear F Seires LED Fiform yakagadzirirwa kugadzirwa kwekuvhenekera mune greenhosue uye yepamhepo yepurazi. Adopt mhando Samsung lm561c yepamusoro bin diodhi uye UL...
Horticulture LED Kupenya Kwepamusoro Kwemiti Dzekurapa Phlizon Linear F Seires LED Fiform yakagadzirirwa kugadzirwa kwemwenje mune greenhosue uye yepamhepo purazi. Adopt brand Samsung yepamusoro bin diodhi uye UL yakanyorwa madhiragi , kuverengera...
Unit Price: USD 450 - 475 / Piece/Pieces
Anodzvanywa 600W Akatungamira Matanho Ekukura Ekurima Kwekurima Magetsi Ekura magetsi ekushandiswa kwemba ave nemukurumbira uye vanhu vazhinji vari kuzvitarisa nezvekurima zvirimwa, kunyanya zvekutanga mhodzi. Zvinonzwika sepfungwa huru. Mwenje...
PHLIZON Samsung Lm301b 600w Yakatakurwa Foldable Kukura Chiedza Kwakakwirira mwenje LED kukura marobhoti inokupa iwe ruzivo nezve kugoverwa kwechiedza wavelengths inoburitswa nechiedza, saizi yenzvimbo yakagadzirirwa kuvhenekerwa, uye chiyero...
Unit Price: USD 399 - 470 / Piece/Pieces
450W Greenhouse chirimwa LED Kurira Chiedza Phlizon Linear F Seires LED Inokura Chiedza inoshanda pa450 watts nekubuditsa kwe1260 µmol s-1, iyi fafitera inowana zvinoshamisa kubudirira kwe2,8 µmol s-1 pa watt. Nzvimbo dzakavimbika dzakabikwa...
Phlizon 240W Greenhouse LED yepamusoro Kurera Mwenje Phlizon Linear F Seires LED Fiform yakagadzirirwa kuendesa simba rinoshandisika kune zvidyarwa zvako uchidya mashoma simba, iwo mutsara wenguva izere wekuvhenekesa iyo inopa zvinoenderana,...
Phlizon Yakanyoroveswa Kura Chiedza 640W Kusarudza IYO YAKAIPA TYPE YEMAHARA KUKUKWIRA Magetsi mazhinji anokura mwenje iwe aunowana nhasi iwo ma "yakazara sipidhi" mwenje, iri mhando ye buzzword zvinoreva kuti iwe unogona kuishandisa ivo...
PHLIZON 640W Foldable LED inokura Mwenje Bhawa Mwenje mikuru ye LED ndiyo yekucheka-kumhedzisiro yekugadzirisa yanhasi chirimwa chirimwa chiri kukura, kunyanya kwema biology greenhouse. Saka, kana uchitenga LED ikure mwenje, unofanirwa kufunga...
Phlizon foldable dhizaini Dimmable dhizaini mwenje LED Kukura Mwenje 600w lm301b lm301h Hydroponic Zvirimwa Kura Chiedza Nei Tisarudze Phlizon yakagadziriswa nevarimi pamusoro pemakore mazhinji ekunyatso kuyedza uye kuyedza. Isu tinonyanya kuburitsa...
New Folding chirimwa LED Kura Chiedza Chizere Spectrum Cheka mashandisiro emagetsi uye dzikisa mabhiri ako !. Ingo bvisa marara ekupa zvigadzirisiti zvisina kudikanwa kune chinomera chakatemwa kutenderera. Chengetedza mari yakawedzerwa nekusada...
Unit Price: USD 457 - 477 / Bag/Bags
Waterproof Kura Lamp 600w / 640w muMishonga Chigadzirwa T iye kupfuura akanaka ukoshi hurumende kuti kudzora akatungamirira purazi chiedza kuchinyanya akapoteredza chiedza saturation pfungwa. Iwe unofanirwa kushandisa Vegetable Bindu Rekusakura Taa...
Samsung 561C Horticultural Inotungamirirwa Mwenje yeStrawberry T iye kupfuura akanaka ukoshi hurumende kuti kudzora akatungamirira purazi chiedza kuchinyanya akapoteredza chiedza saturation pfungwa. Iwe unofanirwa kushandisa Vegetable Bindu...
Samsung Lm301b Kukura Mwenje weGreenhouse Unoziva here chinoita kuti zvidyarwa zvikure zvine hutano uye nekukurumidza.T iye anonyanya kukoshesa chimiro chinodzora kutungamira kwepamhepo kupima kuwanda pakapetwa nechiedza. Kana nguva uye yakajeka...
Samsung Lm301b Kukura Mwenje weGreenhouse Iwe unoziva chii chinoita kuti zvidyarwa zvikure zvine hutano uye nekukurumidza.T iye anonyanya kukoshesa nyika inodzora iyo Led grow Strip Light kuwedzera kwakakomberedza mwenje saturation point. Kana nguva...
Kurima Phlizon 600w Kurima Kwidza Mwenje Iwe unoziva chii chinoita kuti zvidyarwa zvikure zvine hutano uye nekukurumidza.T iye anonyanya kukoshesa nyika inodzora iyo Led grow Strip Light kuwedzera kwakakomberedza mwenje saturation point. Kana...
Indoor Kukura Kwemwenje Chiedza Samsung 301b Iwe unoziva chii chinoita kuti zvidyarwa zvikure zvine hutano uye nekukurumidza? T iye akakosha zvakanyanya kukosha mamiriro anodzora Led grow Strip Light kuwedzera kwakakomberedza mwenje saturation...
600w / 640w Wholesale Led Chiedza Kurima Iwe unoziva chii chinoita kuti zvidyarwa zvikure zvine hutano uye nekukurumidza.T iye anonyanya kukoshesa chimiro chinodzora iro Risimbe Mwenje kusimba kwakakomberedza mwenje saturation point. Kana kuwanda...
Unit Price: USD 280 - 300 / Bag/Bags
10 Bag/Bags USD 280 / Bag/Bags
600w Yakatakurwa Kukura Strip Chiedza Chekutengesa Chekutanga pane zvese, zvidyarwa, sevanhu, vanoda kurovedza muviri, kushanda uye kuzorora. Naizvozvo, paunenge uchishandisa maGreenhouse Akakushwa Ekudyara Kukaedza Kuzadza zvidyarwa nechiedza, iwe...
Yakakwira Simba Yakatakura Chiedza 600w yeHydroponics Iko kurimwa kwezvirimwa zvekurapa, maruva zvidyarwa, miriwo nemichero zvinoenderana nezvakakosha zvezvinzvimbo zvemuchadenga, uye kushandiswa kweiyo Full Spectrum Kusha Chiedza kunofanirwa kune...
Foldable 600w Akatakurwa Mwenje weIndoor Bindu Tsvaga pane hydroponic inotungamirwa inokura mwenje wehydroponics sekuwedzera kwekuvhenekera kwezvirimwa photosynthesis. Tsika dzekunyepedzera mwenje magetsi anogadzira kwakanyanya kupisa. Kana ikakura...
Yakafanana neFoldable LED Chirimwa Inokura Taa 640W Zvakanakisa zveMwenje yeChiedza cheIndoor grow Mwenje Sezvo nharaunda yedu inowedzera kusimudzira uye nharaunda-ichiziva, mwenje ye LED inokurumidza kuva sarudzo inozivikanwa kwazvo kune vese vari...
China PH Mitsara yakasarudzwa Vatengi
Phlizon inyanzvi yepamusoro-tech, inoshandiswa mukutsvakurudza, kugadzirwa, kutengesa mabasa e LED kukura chiedza.Imbahwe iri iri muHuilongda Industrial Park, Shilongzai, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China. United States, Germany, United Kingdom, neSpain.we vanoedza kupa mamiriro ekugadzirisa uye anoshanda zvakanaka.
Inobvuma Samsung LED 5630 sezvitsva zvitsva, izvo zvinobatsira zvekushanda kwepamusoro, kushandiswa kwesimba kushandiswa uye kugadzikana.
Input voltage: AC100-240V, iri nyore kushandisa, yakachengeteka uye yakakodzera chero nyika.
LED Lifespan inosvika kusvika maawa makumi mashanu.
Inokodzera kumarudzi ose emichero kukura, maruva uye zvibereko
Kuchengeteka uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, pasina rusvina uye zvinhu zvinokuvadza
100-277v / 200-480v yekudyara kwemabhizimisi
Yepamusoro yePFFD inoshandiswa pamunzvimbo imwechete
Kupisa kupisa kunyura uye kufa kukanda aluminium shell
Muviri weAluminium nokuda kwekunaka-kupera
Zvimwe zviri nyore uye zviri nyore kugadzirisa
Simba rokuchengetedza, zvakatipoteredza shamwari
Phlizon ndiyo fekitari inogadzira uye tinotengesa zvigadzirwa zvedu pamutengo wakaderera zvakananga, kunze kwezvose zvatinopa Simba, VaFans nematare zvose vane moto unopesana nezvinhu, havangatori moto.
Isu iye zvino tine zvivako mu UK, USA, Canada, Spain, uye Australia, uye tiri kushanda pakuvhura mamwe mabhizimisi mune dzimwe nyika kuderedza nguva yedu yekuendesa.
Isu tine simba reOEM / ODM zvigadziro, nemapoka ane ruzivo, full post-sales support uye yakagadzirirwa unhu hwekutonga.
Isu tinopikira kupa zvinhu zvakanakisisa zvigadzirwa nemakwikwi emitengo, kushandiswa kwekutsvaga, uye kubvuma mabasa kune vatengi vedu.
1.Chiedza chacho hachizi mvura, usasvibisa mvura
2.Haizobata uye kurova Chiedza apo iri kushanda .
3.Kutarisira nzvimbo yebasa iri -20 ~ 40 ° C, 45% ~ 95% RH.
4. Ndapota bvisai simba kana kune mheni inopenya .
5. Iva nechokwadi chokuti nzvimbo yekusimudza inogona kumira katatu uremu hwechiedza.